AtaDistance, Spring is Green – Gold Channel Movies
Jun. 14, 2021 KBS2
1Season 1 Jun. 14, 2021
Episode 1 Jun. 14, 2021
Episode2Jun. 15, 2021
Episode5Jun. 28, 2021
Episode6Jun. 29, 2021
Episode9Jul. 12, 2021
Episode 10 Jul. 13, 2021
Episode 11 Jul. 19, 2021
At A Distance, Spring is Green(멀리서 보면 푸른 봄)
ဒီတစ်ခါတော့ ယူတို့ပူဆွေးပြီး ဇာတ်သိမ်းသွားတဲ့ Youth of May အစားလာတဲ့ At A Distance, Spring Is Green ဆိုတဲ့ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောဂျွန် (Park Ji-hoon) ဟာ မြောင်အီလ်တက္ကသိုလ်က ပထမနှစ်ကျောင်းသားလေးပါ။ အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်တော့ လုံးဝပြီးပြည့်စုံနေတဲ့လူငယ်လေးပေမဲ့ တကယ့်ဘဝမှာတော့ မိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုမခံရလို့ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့လူငယ်လေးပေါ့။
နမ်ဆူဟျွန်း (Bae In-hyuk) ဆိုတဲ့ စီနီယာကျောင်းသားကတော့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမရှိဘဲ မိသားစုအတွက်၊ ကျောင်းစရိတ်အတွက် အလုပ်တွေလုပ်ရင်းရုန်းကန်နေရသူပါ။ စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသူလေး ဂင်ဆိုဘင်ကတော့ ကွာရှင်းထားတဲ့မိဘတွေရှိပြီး ဖခင်နဲ့အတူတူနေနေပါတယ်။ ကြင်နာတတ်ပြီး လှပတဲ့ကောင်မလေးပေါ့။ ဒီသုံးယောက်တွေ့ဆုံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းက လူငယ်လေးတွေရဲ့ ဘဝကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။
လူငယ်တွေရဲ့ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေဟာ အဝေးကနေကြည့်လိုက်ရင် နွေဦးလေးလိုပဲ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပျော်စရာအပြည့်လို့ ထင်ရပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ကြမ်းတမ်းမှုတွေ အေးစက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်ပါတယ်တဲ့။ လူငယ်တွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာ Gold Channel Drama မှာ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး။
Translated by Athena,Faith,Hnin Aye Nyein and Youn Kyi Phyu
Original title 멀리서 보면 푸른 봄
LaverneSeptember 5, 2021Reply
& it helped me out much. I’m hoping to give something again and help others such as you helped me.
Feel free to visit my web blog – asmr but (bit.ly)
ElissaSeptember 4, 2021Reply
Here is my blog … asmr are (j.mp)
RamonSeptember 2, 2021Reply
Also visit my blog post; an asmr (j.mp)
SusanneSeptember 1, 2021Reply
DoreenSeptember 1, 2021Reply
Here is my blog post – quest bars this (http://t.co/zJCfXFs1I1)
LeonAugust 30, 2021Reply
Feel free to surf to my web page :: quest bars what (t.co)